प्लिज मलाई बचाउँनुहोस् – onlinekhelkhabar.com
प्लिज मलाई बचाउँनुहोस्
सलमान शाह	Posted on श्रावण ११ २०७७, आईतवार
सलमान शाह (अनलाइन खेल खबर ) । जनकपुरमा एउटा सरकारी अस्पताल छ । जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जो आजकल क्रिकेट खेलाडी कुन्दन सिंहको अभिन्न अंग जस्तै बनेको छ । केहि महिना अघिसम्म ब्याट र बलमा रमाई रहने कुन्दन अहिले जिन्दगीको खेलमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।
जिन्दगी जसो तसो चल्दै थियो ,तर ठिक आज भन्दा ९ महिना अगाडी उनको जिन्दगीले कल्पना बाहिरको मोड लिन पुग्यो ।
त्यसबेला उनलाई केहि दिन देखि केहि असजिलो महशुस भईरहेको थियो । काठमाडौंमा ठूलो सपना बोकेर आफ्नो क्रिकेटिङ यात्रालाई अगाडी बढाउँन भनेर आएका उनले त्यस क्रममा काठमाडौंमा रहेको नेपालको प्रतिष्ठित तथा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा आफ्नो चेक जाँच गर्ने निधो गरे ।
कुन्दनलाई बल्ल त्यहाँ पुगेर थाहा भयो । उनको मिर्गौलामा समस्या रहेछ । यो खबर जब उनलाई चिकित्सकले सुनाए त्यसपछि छाँगाबाट खसेर छुट्टै कालो संसार भित्र पुगेको महसुस त्यसबेला उनलाई भयो ।
अनेकौं मनमा प्रश्न र डर एकै चोटि उत्पन्न हुन् थाल्यो । अब के होला ? कस्तो होला? भन्ने पनि लाग्यो । र त्यसबेलानै उनले जिवनको अत्यसम्मको कल्पना गर्न भ्याए । चिकित्सकले उनलाई हौसला दिदैं सम्झाउन थाले साथै उनलाई अब कसरी उपचार गर्ने भनेर जानकारी दिन थाले । त्यसपछी भने उनको काठमाडौं बसाई सकिएर आफ्नो गाउँ महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर फर्किए । मनमा लागिरहेको थियो । अब के म बाचौंला र यति ठूलो रोग म मा लाग्यो । हामीसँग यो किसिमको रोगसँग लडन क्षमता पनि छैन् । अब के हुने होला !
आमा –बुबालाई गुमाईसकेका कुन्दन अहिले मामा – माईजुको संरक्षणमा रहँदै आएका छन् । परिवारसँग यो किसिमको रोगसँग लडने क्षमता पनि छैन । दुबै मिर्गौला फेल भई अहिले डाईलासिसको साहारा लिईरहेका कुन्दनलाई अहिले भने केही आशा भने पलाएको छ ।
निराश बनेर जिवनको अन्त्य सम्मको दिन गन्दै बसेका कुन्दनको अहिले आत्मबल बढेको छ । आर्थिक स्थिती कमजोर रहेका कुन्दनले उपचारार्थ पछिल्लो केहि समय देखि सहयोगी मनको पनि साथ् पाउँन थालेका छन्।
जस अन्तर्गत एकतर्फ युवा क्रिकेट अभियन्ता विज्ञान कार्कीले सहयोग रकम जुटाउने अभियान चलाईरहेका छन् । भने अर्कोतर्फ उनलाई चिन्ने जान्नेले पनि ब्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्दै आएका छन् । यसबीचमा प्रदेश नम्बर २ क्रिकेट संघले पनि उनलाई उपचारमा थप सहयोग पुगोस भनेर केहि दिनअघि एक लाख सहयोग पनि गरेको थियो ।
यसरी सहयोग र आफू प्रती देखिएको माया देखेर कुन्दन हाल केही आशावादी पनि देखिएका छन् । अहिले डाईलासिसको साहारामा रहेका उनले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार डोनर प्राप्त भएको खण्डमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने सोच बनाएका छन् ।
त्यसका लागि आर्थिक जुटाउनु पर्ने छ । मिगौला प्रदान गर्ने डोनरसँग पनि कुरा भएको छ । यदी सबै ठिक भयो भगवानको पनि साथ रहयो भने त्यो सम्भव पनि रहला कुन्दन भन्छन् ।
‘त्यो सबै जिम्मा तपाईंहरुलाई छोडेको छु ,अब केवल आशा तपाईंहरुसँगबाट जिवित छ । अझै मलाई बाच्न मन छ,क्रिकेट खेल्न मन छ । प्लिज मलाई बचाउँनुहोस् ’ ।
थुप्रै क्रिकेट प्रतियोगितासँगै सन् २०१८ को प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश २ बाट खेलेका कुन्दन यो अवस्थामा पुग्दा र उपचारका लागि सहयोगको याचना गर्दै गर्दा सम्बन्धित संघबाट ठोस सहयोग उनलाई हालको मितिसम्म पुगेको भने छैन ।
खेल खेलाडीको हक हितका लागि भनेर खोलिएका संघ – संस्थाहरु पनि बेखबर जस्तै देखिएका छन् । यस्तोमा सम्बन्धित निकायसँगै ती संघ संस्थाहरुले पनि उनको दुखमा मलमको काम गर्नुपर्ने आवस्यक छ ।
परेको बेलामा नगरे कहिँले गर्ने,हामीले नगरे उनलाई कसले गर्ने क्रिकेटका माध्यमबाट देशका लागि केहि योगदान पुर्याउने सोच बनाएको एउटा युवा अहिले जिवनसँग लडिरहेका छन् । यस अवस्थामा उनलाई हाम्रो साथको अत्यतै जरुरत छ । हाम्रो जति साथ र सद्भाव उनि प्रति देखियो उनिमा थप उर्जा र हौसला प्रदान पक्कै हुनेछ ।
Previous Postनिर्णायक खेलमा इंग्ल्यान्ड हावी
Next Postपूर्व कप्तान हरि अब नाच्ने
फोटोमा हेर्नुहोस् ! फुटबल टोलीको कोरोना परीक्षण
आईपीएलको मुख्य प्रायोजकका लागि पतंजलीको चासो
रंगशाला निर्माण कार्यमा खटिएका कामदारहरुलाई पुरस्कार वितरण
सोमबार र मंगलबार फुटबल खेलाडी र कर्मचारीको कोरोना पीसीआर परीक्षण हुने
एडिलेड नेप्लिज क्रिकेट एसोसियसनबाट कुन्दनलाई ठूलो सहयोग प्राप्त
टि-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका पाँच सर्वाधिक उच्च स्कोर
श्रावण २३ २०७७, शुक्रबार
इंग्ल्यान्डमाथि आयरल्यान्डको सानदार जित
श्रावण २१ २०७७, बुधबार
आईपीएललाई ठूलो झटका : भिभोले साथ छोड्ने
श्रावण २५ २०७७, आईतवार
कोरियोग्राफर धनश्री वर्मासँग युजवेंद्र चहल विवाह बन्धनमा बाँधिदै
श्रावण २४ २०७७, शनिबार